Momba ny volavolan-dalana fampitsaharana vohoka na ny fanalan-jaza - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Hafatry ny Evekan'i Madagasikara oktobra 2021
Momba ny volavolan-dalana fampitsaharana vohoka na ny fanalan-jaza
Indro ampitaina amintsika manontolo ny Hafatry ny Evekan'i Madagasikara manolona ny fandinihan'ny Parlemanta ny volavolan-dalana fampitsarahana vohoka na fanalan-jaza.
Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanan'ny Tompo
Am-panetrentena sy am-pahatsorana no anoratana amintsika ity taratasy misokatra ho anareo Loholona sy Solombavambahoaka ity fa indrindra ianareo Loholona sy Solombavambahoaka kristianina katolika mba hahafahantsika mandinika araka ny konsiansy alohan'ny handatsaham-bato mikasika ny fanalan-jaza na « avortement ».
Reny sy Mpampianatra ny Eglizy...
Reny sy Mpampiaantra ny Eglizy ka adidiny ny mikolokolo sy mikarakara ny zanany rehetra na lehibe na kely na mbola any am-bohoka. Mpampianatra sy Mpaminany ka tsy mitsahatra manoro ny marina na amin'ny fotoana na tsy fotoana ary ny « marina dia i Kristy. Izy no maha olon'afaka antsika » (Jo 17,17)... Konsiansy ny Eglizy ka manampy antsika hahatsapa ny maha izy ny tsirairay, hahatsapa ny maha olona satria i Kristy no Olona lavorary, Endriky ny Ray (Kol 1, 15)... Reny niteraka am-panahy, manabe sy mikolokolo ary indrindra natao hamonjy sy hiaro ny Eglizy. Ho azy tokoa manko dia masina sy manan-kasina ireto telo toko ireto dia : ny aina, ny olombelona ary ny fianakaviana. Hany ka zokin'adidiny ny miaro sy mikolokolo izany amin'ny heriny rehetra.
Reny no fototenin'ny Firenena
Tsy kisendrasendra ihany koa no niavian'ny teny hoe « firenena» sy ny teny hoe «renivohitra » sns ho antsika Malagasy. Manambara fa Loharano sy Fototra tokoa ny « reny» ary rehefa miteny hoe « reny dia ao ny AINA »... Noho izany mitodika manokana aminareo Solombavambahoaka-reny ihany koa sady «reny» rahateo ny filohan'ny Antenimiera... Araka ny re dia handinika sy hisafidy ny volavolan-dalàna mikasika ny fanalan-jaza na ny « avortement » ianareo... Reny natao hamelona ny olom-pirenena sy ny vahoaka ao aminy ny Firenena : mpamelona izy fa tsy mpamono.
Fahamalinana momba ny voambolana...
Aza varimbariana amin'ny fiteny na voambolana isika fa io no fomba itsofohan'ny hevitra manapotika entin'ny rivotra tandrefana ankehitriny izay lazaina mitondra fandrosoana hono. lo resaka voambolana io ihany koa no nampiasain'ny demony hamitahana an'i Eva sy Adama tamin'ny voalohany... Olona manam-panahy isika ka afaka manao sivana, sao sanatria tsy mifanaraka amin'ny fisainana sy fahamendrehana maha Malagasy ary ny tandro Hasina (éthique) maha olona mihitsy aza ny hevitra tinapaka. Aza variana amin'ny kilalaon-teny fa mandoza... lo lalana io dia efa tsy neken’ny Antenimieram-pirenena sy ny Filankevitry ny minisitra tamin'ny fotoan'androny... Asa inona no mahatonga azy izao indray ? Sao sanatria « hamboly tontolom-piainana mikolokolo fahafatesana » (cf. culture de la mort - Joany Paoly II) eto amintsika ve isika ?
Ambonin'ny zava-drehetra ny AINA...
AINA ITY hoy ny « Razantsika hendry ». Satria ho an'ny Malagasy dia sady « mamy ny aina» no « mamy ny miaina». Miaiky isika fa ambonin ny zavatra rehetra sy Masina indrindra ireo zaza ao an kibo, eny fa na dia ny manana kilema sy ny mahantra aza. Eny, masina ireo zaza ireo na nampoizina na tsy nampoizina na tsy fidiny na nirina. Ny zavatra rehetra dia miaro azy. Ny AINA dia ambony noho ny resaka ekonomika sy ny lalàna. Na ahoana na ahoana dia izy no sarobidy indrindra satria fanomezana ambony amin'ny Zanahary ary «Lahitokana ny aina».
Olona ny zaza miforona...ka ianareo, isika no solombavany...
Efa olona ny zaza ao an kibo ary ianareo koa dia solombavambahoakan’izy ireo izay tsy mba manam-peo sy tsy afaka miaro tena akory. Solombavan'izy ireo ianareo satria mila arovana ny zon'izy ireo izay tsy manan-tsiny. Manan-jo hivelona toa antsika rehetra izy ireo na ahoana na ahoana ny fiainany. Tompon’andraikitra amin'ny fiarovana azy ireo ny ray aman dreniny na ahoana na ahoana ny nampisy azy ireo. Olona miforona ao an-kibo izy ireo na amin'ny fotoana fahafiry na amin'ny fotoana fahafiry... Ity lalàna ity dia manome alalana ny reny hamono ny zanany... Soatoavina fototra maha Malagasy ve izany ? Afaka miteny sy mijoro sy hiaro tena (légitime défense) ve izy ireny ? Koa antsika Solombambahoaka sy Loholona ny mandinika sy mandanjalanja.
Fandresena ny fahantrana no lalana sy lalàna fa tsy famonoana...Ny olona no voalohan-karena...
Ny fandresena ny fahantrana sy ny fikarohana ny fitsaboana ary ny fanampiana ny ray aman-dreny no ilaina hamafisina. Aoka hanangana tontolom-piainana miaro ny AINA amin'ny alalan'ny soatoavina malagasy fototra dia ny FIHAVANANA (civilisation de l'amour). Misaotra ireo Fikambanana miaro sy manampy ny ray aman-dreny mitondra vohoka isika. Hanampy azy ireo handray am-pitokiana ho fanomezana ny zaza hateraka. Mangataka ny fitondrana isika hanangana fotodrafitrasa hamokatra sakafo sy fanabeazana ka tsy zary vesatra ho an'ny firenena ireo mahavita fianarana fa kosa ho zary fanoitra mampandroso ny olona manontolo sy ny olon-drehetra
Mankasitraka ireo ezaka rehetra miaro sy mampivelatra ny AINA
Ny Eglizy Katolika dia miezaka hanabe HIAINA SY HITIA ary vonona hanaparitaka sy hizara izany amin'ny olona sy Fikambanana tsara sitra-po rehetra. Ny fomba ara-boajanahary no hanampy antsika handrindra ny isan’ny zaza hateraka. Ary mitaona sy mampirisika ary mankahery ny kristianina rehetra sy izay tsara sitra-po rehetra mba hiaro tena mafy amin'ny fijangajangana mahalavo mora foana ny olon'izao tontolo izao, fa izany no isan'ny antony lehibe mahatonga ny vohoka tsy nirina sy hanala zaza. Tsarovy fa «Tempolin'ny Fanahy Masina ny vatantsika» (1 Kor 6,19) ka sarobidy sy masina. Misaotra ireo Fikambanana mitaiza ny zaza sembana ary mijoro ho vavolombelona fa Masina ny AINA ary «Endrik'Andriamanitra ny Olombelona» (Jen 1, 26-27), na dia sembana aza, ary vao mainka sarobidy aza noho izy ireo mijaly, miombona anjara amin'ny fijalian'i Kristy Mpamonjy antsika. Misaotra ireo ray aman-dreny nandresy ny tahotra sy henatra ka nandray am-pitokiana ny zanany. Tsy Heroda isika ka hampamono ny zaza mety hanelingelina ny fiainantsika (Mt 2, 16). Ny mampiavaka ny Razantsika hendry dia mametraka ny zanaka ho ambonin’ny zavatra rehetra, eny ho ambonin'ny tena aza, «sombin'ny aina», «menaky ny aina», «solofo sy dimby» ny zanaka.
Vavaka sy tsodrano
Hotsilovin’ny Fanahy Masina anie ianareo sy isika ray aman-dreny rehetra ka hiaro ny zanatsika izay hoavin'ny Fianakaviantsika sy ity Madagasikara ity. Efa ripaka ny ala sy ny biby eto amintsika ka tsy azo ekena koa ny handripaka ny olona, fa indrindra ireo zaza any an-kibo izay tsy afaka mikiakiaka hiantso vonjeo amintsika ray aman dreniny. Mivavaka ho anareo. Volan'ny Rozery izao ka miaraka amin'i Masina Maria sy Md Josefa Ray Mpiaro ny Eglizy ary ireo Olomasina sy Olontsambatra Malagasy isika no mitalaho ny Fanahy Masina mba hanilo antsika mianakavy, fa indrindra ianareo mivory. Ao anatin'ny Sinoda rahateo izao isika, izay handalinana ny « Eglizy miara-dia, miombona mandray an-tanana, ka irahiana» : samy zanaky ny Eglizy isika ka antsoiny hijoro sy handray ny andraikitra manandrify antsika tsirairay avy.
Anio, 22 oktobra 2021
Fahatsiarovana an'i Md Joany Paoly II, Papa
+ RAMAROSON Marc Benjamin, cm Arsevekan'Antsiranana Filohan'ny CEEEC
+ Marie-Fabien Raharilamboniaina, ocd , Évekan'i Morondava Filohan'ny CES